१० सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड अफलाइन मल्टिप्लेयर खेलहरू २०२१ - नरम
१० सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड अफलाइन मल्टिप्लेयर खेलहरू २०२१
साथीहरूसँग एन्ड्रोइडमा मल्टिप्लेयर खेलहरू हेर्दै हुनुहुन्छ? तर इन्टरनेटको अस्थिरताबाट थकित हुनुहुन्छ? चिन्ता नलिनुहोस् यहाँ २०२० को १० सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड अफलाइन मल्टिप्लेयर खेलहरूको सूची छ।
डिजिटल क्रान्तिको यस युगमा, हामीले खेल्ने तरिका पनि पूरै परिवर्तन भएको छ। आजकल, अनलाइन खेलहरू वास्तविक चीज हुन्। साथै, साथीहरूसँग खेल्दै मल्टिप्लेयर खेलहरूमा पनि परिणत भएको छ। त्यहाँ को रूप मा इन्टरनेट मा बाहिर को एक विस्तृत श्रृंखला छ। यो वास्तवमै अचम्मको कुरा हो, विशेष गरी यदि तपाईं त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मल्टिप्लेयर गेमिंगमा रुचि राख्नुहुन्छ।
जबकि यो ठूलो समाचार हो, यो धेरै चाँडै नै अत्यन्तै जबरदस्त पनि हुन सक्छ। त्यहाँ बाहिर उनीहरुको अगाडि, तपाईले कुन छनौट गर्नु पर्छ? तपाईका लागि उत्तम विकल्प के हुने छ? यदि तपाईं यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने, डराउनु हुँदैन, मित्र। तपाईं सहि ठाउँमा आउनु भएको छ। म यहाँ छ कि तपाईं मद्दतको साथ सटीक साथ। यस लेखमा, म तपाईलाई २०२१ मा १० सर्वश्रेष्ठ एन्ड्रोइड अफलाईन मल्टिप्लेयर खेलहरूको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु जुन तपाईले अहिले सम्म इन्टरनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। मँ तिनिहरु मध्ये हरेकमा अझ विस्तृत जानकारी पनि दिन जान्छु। यस लेख पढ्नु समाप्त भएपछि तपाईलाई यी खेलहरू मध्ये कुनैको बारेमा अझ बढी जान्नु आवश्यक पर्दैन। त्यसैले अन्तमा पक्का गर्न निश्चित गर्नुहोस्। अब, अधिक समय खेर फालिरहनु बिना, हामी यस विषयको गहिराइमा डुबुल्की मारौं। पढ्न जारी राख्नुहोस्।
१. डूडल सेना २: मिनी मिलिशिया
Tan. ट्याks्क लडाई
Race. रेसर बनाम पुलिसहरू: मल्टिप्लेयर
Mini. मिनी मोटर रेसि।
Bad. ब्याडमिन्टन लिग
Cra। पागल रेसि।
१०. विशेष सेना समूह २
तल उल्लेखित १०१ उत्तम एन्ड्रोइड अफलाइन मल्टिप्लेयर खेलहरू २०२१ मा छन् जुन तपाईं अहिले इन्टरनेटमा फेला पार्न जाँदै हुनुहुन्छ। तिनीहरू प्रत्येकको बारे मा विस्तृत जानकारी फेला पार्न सँगै पढ्नुहोस्। हामी सुरु गरौं।
सबै भन्दा पहिले, म तपाईंलाई कुरा गर्न गइरहेको छु पहिलो उत्तम एन्ड्रोइड अफलाइन मल्टिप्लेयर खेल Doodle आर्मी2भनिन्छ: मिनी मिलिशिया। यो अहिले सम्म इन्टरनेटमा सबैभन्दा धेरै मनपराइएको अफलाइन मल्टिप्लेयर खेलहरू मध्ये एक हो। यो तीव्र मल्टिप्लेयर शूटिंग खेलमा, तपाईं कुनै पनि समय मा छ थप थप खेलाडीहरू साथ खेल्न सक्नुहुन्छ। खेल Wi-Fi मा खेल्नु पर्छ।
खेल केहि धेरै आश्चर्यजनक सुविधाहरु को साथ लोड आउँछ। तिनीहरूमध्ये केही हतियारहरूको विशाल दायरा हुन् जस्तै स्निपर, शटगन, फ्लेम थ्रोर र अरू धेरै। यी हतियारहरू, बारी मा, तपाईं पराजित गर्न को लागी एकदम सक्षम बनाउन को लागी बनाउनुका साथसाथै खेल मा सामना गर्न लाग्नु भएको सबै प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई तल पुर्‍याउनुहुन्छ। यसका अतिरिक्त, तपाईंले वास्तविक खेल खेल्न सुरु गर्नु अघि, यो तपाईंको लागि पूर्ण रूपमा सम्भव छ - खेललाई धन्यवाद छ, पक्कै पनि - तपाईंको शुटि as तथा लडाई कौशललाई तिखार्ने उद्देश्यका लागि सिर्जेन्ट अन्तर्गत तालिम दिन।
विकासकर्ताहरूले यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई नि: शुल्क शुल्कका लागि खेलको आधारभूत संस्करण प्रस्ताव गरेका छन्। जे होस्, त्यो संस्करण विज्ञापनको साथ आउँदछ। अर्कोतर्फ, तपाईंले केहि थप उन्नत सुविधाहरू अनलक गर्नका लागि केही इन-एप खरीदहरू गर्नुपर्नेछ जस्तै धेरै हतियारहरू र दोहोरो-चलाउने , र अरु धेरै।
डूडल आर्मी २ डाउनलोड गर्नुहोस्: मिनी मिलिशिया
कार रेसि the सबैभन्दा व्यापक मनपराउने विधाहरू मध्ये एक हो जब यो अनलाइन गेमिंगको लागि आउँदछ। र यस विधामा, सब भन्दा लोकप्रिय मध्ये एकलाई Asphalt 8 भनिन्छ। यो नै हो 10 हाम्रो भन्दा राम्रो एन्ड्रोइड अफलाईन मल्टिप्लेयर खेल को सूची मा हाम्रो अर्को प्रविष्टि हो। खेल - जस्तो तपाईले अहिले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ - मल्टिप्लेयर गेमप्लेको साथ आउँदछ।
यस खेलमा, तपाईं आफ्ना साथीहरूसँग सँगै आउन सक्नुहुन्छ वाइफाइ हटस्पट र तपाइँको सुविधा अनुसार खेल सुरु गर्नुहोस्। खेल धेरै फरक रेसि tra ट्र्याकहरू र रेसि cars कारहरूको साथ आउँदछ जुन प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई उत्तम बनाउँदछ। यसका अतिरिक्त, यो तपाईको लागि सम्भव छ सबै भन्दा बढि players खेलाडीहरु लाई कुनै पनि बिन्दुमा खेल खेल्नको लागि। त्योसँगै, तपाईं पनि कुनै पनि ट्र्याक चयन गर्न सक्नुहुनेछ available० उपलब्ध खेलहरूमा यो उपलब्ध।
खेलका विकासकर्ताहरूले यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई नि: शुल्क शुल्कको लागि खेल प्रस्ताव गरेका छन्। यद्यपि यो सम्पर्क अनुप्रयोगहरूसँग आउँदछ। यसका अतिरिक्त, तपाईं खेलका बिभिन्न सुविधाहरू अनलक गर्नका लागि in-app खरीदहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Asphalt 8 डाउनलोड गर्नुहोस्
के तपाईं कोही हुनुहुन्छ जो ती रेसि asको साथ साथै खेल्न थकित हुनुहुन्छ लडाई खेलहरू ? के तपाईं अब क्लासिक प्लेटफोर्मर खेलको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि यी प्रश्नहरूको उत्तर हो हो भने, त्यसोभए तपाईं आनन्दित हुने समय भयो। तपाईं अन्तत: सही ठाउँमा आउनु भएको छ। मलाई २०२१ मा अर्को उत्तम एन्ड्रोइड अफलाईन मल्टिप्लेयर खेल प्रस्तुत गर्न मलाई अनुमति दिनुहोस् जुन तपाईं अहिले नै इन्टरनेटमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। खेल Badland भनिन्छ। खेलले स्थानीय मल्टिप्लेयर समर्थनको सुविधाको गर्व गर्दछ, एक यस्तो सुविधा जुन तपाई अहिले धेरै अनलाइन गेमहरूमा फेला पार्न सक्नुहुन्न जुन अहिले त्यहाँ छन्।
विन्डोज १० अपडेट त्रुटि ०x80070020
यस खेलमा, तपाईं एकै उपकरणमा चार भन्दा बढी खेलाडीहरू यसलाई थप गर्न थप्न सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त, खेलको ग्राफिक्स सेक्सन पनि वास्तवमै राम्रोसँग गरिएको छ। त्यो मात्र होईन, तर स्तर नियंत्रकको साथ पूर्ण नियन्त्रणकर्ता समर्थन पनि त्यहाँ छ प्रयोगकर्ता अनुभवलाई उत्तम बनाउन। क्लाउड बचत सुविधा सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं खेल मा बनाउने प्रगति को कुनै संकेत कहिल्यै हराउन छैन, संसारमा तपाईं जहाँ भए पनि फरक पर्दैन। मानौं कि यी सबैले तपाईंलाई खेलको लागि प्रयास गर्न र खेल्न पर्याप्त कारण भएको थिएन, यहाँ अर्को रोचक तथ्य पनि छ - यो खेलसँग उपयुक्त छ एन्ड्रोइड टिभी । के तपाईं अझ बढि माग्न सक्नुहुन्छ?
खेल पहिलो स्थानमा खेल्नको लागि एकदम सजिलो छ। यो फेरि यसको धेरै प्रयोगकर्तालाई ठूलो लाभ हो। यसका अतिरिक्त प्लेटफर्मर तत्व खेलको अनौंठो विशेषताहरू मध्ये एक हो। खेल बजारमा अहिले धेरै लामो समयदेखि आएको छ, यसले दुवैको मनोरन्जन मूल्य र छोटो प्रमाणित गर्दछ। अर्कोतर्फ, विकासकर्ताहरूले यसलाई अविरल अन्तरालहरू अपडेट गर्दछन्, त्यसैले कुनै पनि बगहरू वा मिति सुविधाहरूको बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन।
विकासकर्ताहरूले यसका उपयोगकर्ताहरूलाई खेल दुबै निःशुल्क र सशुल्क संस्करणको लागि प्रस्ताव गरेका छन्। नि: शुल्क संस्करण आफैमा राम्रो छ तर केही सुविधाहरूको अभाव छ। सबैभन्दा धेरै खेल बनाउनको लागि, तपाईंले premium 99.99 to सम्म सदस्यता शुल्क तिर्दै प्रिमियम संस्करण किन्नुपर्नेछ।
Badland डाउनलोड गर्नुहोस्
अर्को उत्तम एन्ड्रोइड अफलाइन मल्टिप्लेयर खेल जुन २०२१ मा म तपाईं बारे कुरा गर्नेछु एक धेरै नै तीव्र गहन मल्टिप्लेयर खेल हो जुन तपाईं अहिले सम्म इन्टरनेटमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। खेललाई ट्याks्क बैटल भनिन्छ, र यसले तपाईंलाई र तपाईंको साथीहरूलाई रमाईलोसँग मनोरन्जन गर्ने काम गर्दछ।
खेल स्थानीय Wi-Fi मा खेल्न सकिन्छ। खेल धेरै फरक खेल मोडहरू संग आउँछ कि संग खेल्न काफी मजा छन्। त्यसका अतिरिक्त, कार्यले भरिएको गेमप्लेले यसको फाइदाहरूमा थप्दछ। नकारात्मक पक्षमा, ग्राफिक्स सेक्सन एकदम कार्टुनिश देखिन्छ र अझ राम्रो बनाइएको हुन सक्दछ, विशेष गरी जब तपाईं यसलाई अन्य Android अफलाइन मल्टिप्लेयर खेलसँग यो सूचीमा तुलना गर्नुहुन्छ।
विकासकर्ताहरूले यसका सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई नि: शुल्क शुल्कको लागि खेल प्रस्ताव गरेका छन्।
ट्या Tan्क युद्ध डाउनलोड गर्नुहोस्
अब, अर्को उत्तम एन्ड्रोइड अफलाइन मल्टिप्लेयर खेल जुन २०२१ मा म तपाईंसँग कुरा गर्न जाँदैछु रेसर बनाम भनिन्छ। Cops। खेल त्यस्तो छैन - जस्तो कि तपाई अब शायद खेलको नामबाट अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ - एक परम्परागत रेसि game खेल जुन तपाईले अन्यथा इन्टरनेटमा फेला पार्नुभयो। सबै खेलाडीहरूले या त एक खेलको बीचमा रेसर वा सिपाही हुन छनौट गर्नुपर्नेछ।
अब, यदि तपाइँ एक रेसरको रूपमा छनौट गर्नुभयो भने, तपाइँ रेसलाई पूरा गर्न लाग्नुहुन्छ कुनै पनि पक्रिएन। अर्कोतर्फ, यदि तपाइँको छनौट एक पुलिस बन्ने थियो, त्यसोभए तपाइँको कार्य रेसरलाई पक्रनु हो उनी वा उनीले दौड पूरा गर्नु अघि। खेलको फिजिक्स ईन्जिन एकदम अचम्मको छ। यसका अतिरिक्त तपाईले कारको विशाल दायराबाट पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
डूडल आर्मी २: मिनी मिलिटियाको समान, यस खेलका विकासकर्ताहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई निःशुल्क संस्करणको लागि आधारभूत संस्करण प्रस्ताव गरेका छन्। यद्यपि संस्करण केहि विज्ञापनका साथ आउँदछ। यसका अतिरिक्त, तपाईं अद्यावधिक भएको संस्करणहरू अनलक गर्न इन-गेम मुद्रा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। इन-गेम मुद्रा कमाउने तरिका भनेको खेल खेल्दै र जित्नुका साथै in-app खरीदहरू मार्फत हो।
रेसर बनाम पुलिसहरू डाउनलोड गर्नुहोस्: मल्टिप्लेयर
२०२१ मा अर्को उत्तम एन्ड्रोइड अफलाईन मल्टिप्लेयर खेल जुन अब म तपाइँसँग कुरा गर्न जाँदैछु भनिन्छ मिनी मोटर रेसि।। यो एक खेल हो जुन मानिसहरू संसार भर मा माया गर्छन् र तपाइँको मनोरन्जन को एक ठूलो काम गर्दछ।
यो पनि पढ्नुहोस्:7Android for का लागि सर्वश्रेष्ठ नक्कली आगमन कल अनुप्रयोगहरू
खेल तपाईं को छनौट गर्न को लागी सानो कार को एक विस्तृत श्रृंखला को साथ आउँछ, यसको फाइदाहरू मा जोड्न। यसका अतिरिक्त, यो खेलमा उपलब्ध on० भन्दा बढिबाट दौडको लागि कुनै पनि ट्र्याक चयन गर्न पूर्ण रूपमा सम्भव छ। खेल मल्टिप्लेयर गेमिंग मोडसँग उपयुक्त छ। अझ राम्रो कुरा के हो भने यो सुविधा वाइफाइ हटस्पटमा मात्र नभएर ब्लुटुथमा पनि उपलब्ध छ।
हामी तपाईंको क्यामेरा ०xa00f4244 फेला पार्न सक्दैनौं
विकासकर्ताहरूले यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई नि: शुल्क खेल प्रस्ताव गर्न छनौट गरेका छन्। जे होस्, खेल इन-एप खरीदसँग आउँदछ।
मिनी मोटर रेसि Download डाउनलोड गर्नुहोस्
अब, अर्को उत्तम एन्ड्रोइड अफलाईन मल्टिप्लेयर खेल जुन म तपाईसँग कुरा गर्छु बमब्स्क्वाड भनिन्छ। यो एक खेल बिना हो जुन यसको काम शानदार तरिकाले गर्दछ र निश्चित रूपमा तपाइँको समय र ध्यानको लायक छ।
खेल एक पार्टी शैली को लागी आवश्यक छ। यो एक र्याग गुडिया भौतिकीको साथ विस्फोटको एक विस्तृत श्रृंखला को साथ आउँछ। यस खेलमा, तपाईको लागि कुनै पनि समयमा as भन्दा बढी सहभागीहरू जोड्न पूर्ण रूपमा सम्भव छ। अब, खेलमा के हुन्छ यी सबै खेलाडीहरू खेल जित्नको लागि एक अर्कालाई बम गर्न प्रयास गर्दैछन्। खेल हार्डवेयर नियन्त्रकहरूसँग उपयुक्त छ। यसका अतिरिक्त, एन्ड्रोइड टिभी समर्थन सुविधा पनि उपलब्ध छ। त्योसँगै, खेल रिमोट कन्ट्रोल अनुप्रयोगसँग पनि सुसज्जित छ। यसले, फलस्वरूप, खेलाडीहरूले एन्ड्रोइड टिभीमा कन्ट्रोलर किन्नु नपर्ने गरी खेलको मजा लिन सम्भव बनाउँदछ।
विकासकर्ताहरूले यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई नि: शुल्क खेल प्रस्ताव गर्न छनौट गरेका छन्। यद्यपि खेल विज्ञापनको साथ आउँदछ।
Bombsquad डाउनलोड गर्नुहोस्
अब, २०२१ मा अर्को उत्तम एन्ड्रोइड अफलाईन मल्टिप्लेयर खेल जुन म तपाईसँग कुरा गर्न लागिरहेको छु ब्याडमिन्टन लिग। खेल - जस्तो कि तपाईले अब निश्चित रूपमा नामबाट अनुमान लगाइसक्नु भएको छ - धेरै ब्याडमिन्टन खेल्नु हो।
यस खेलमा, Wi-Fi बाट तपाईं आफ्ना साथीहरूसँग खेल्न यो सम्भव छ। यसको अतिरिक्त, तपाईंको आफ्नै चरित्र सिर्जना गर्नका साथै अनुकूलित गर्न पनि सुविधा छ। यसले पालैपालो, तपाइँ तपाइँको खेल व्यक्तित्व राम्रोसँग नक्कल गर्न सक्षम गर्दछ साथै थप शक्ति र नियन्त्रण तपाइँको हातमा राख्दछ। त्योसँगै, तपाईले शर्त पनि गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्येक एक खेलमा खेल सिक्का पनि जित्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक्स सेक्सन राम्रो राम्रो हेरचाह गरिएको छ। ब्याटमिन्टनको वास्तविक विश्व भौतिक विज्ञानको साथ शट्लककको चालहरू खेलमा साँच्चै राम्रो चित्रण गरिएको छ।
विकासकर्ताहरूले यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई नि: शुल्क खेल प्रस्ताव गर्न छनौट गरेका छन्।
ब्याडमिन्टन लिग डाउनलोड गर्नुहोस्
पागल स्टन्ट गर्न मन पराउने कोही हुनुहुन्छ? के हतियारहरू मार्फत शूटिंग गर्दा तपाईले अर्को खेलाडीलाई उतार्नका लागि उत्साहित पार्नुभयो? यदि प्रश्नहरूको उत्तर हो हो भने, त्यसोभए तपाईं ठीक ठाउँमा हुनुहुन्छ, मेरो साथी। मलाई २०२१ मा अर्को उत्तम एन्ड्रोइड अफलाईन मल्टिप्लेयर खेल प्रस्तुत गर्न दिनुहोस् जुन तपाईले अहिले नै इन्टरनेटमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। खेललाई पागल रेसि called भनिन्छ, एक नाम जुन एकदम उपयुक्त छ।
खेल तपाईको छनौटको लागि कारको विस्तृत श्रृंखलाको साथ आउँछ। यी प्रत्येक कारको आफ्नै गुण, सुविधाहरू, र सुविधाहरूको सेट हुन्छ। यसका अतिरिक्त, यस खेलमा, तपाई बिभिन्न स्थानहरूमा खेल्न पूर्ण रूपमा सम्भव छ - छ ठ्याक्कै - जुन ग्रामीण इलाका, औद्योगिक क्षेत्र, बाह्य मार्ग, र अधिक धेरै हो।
खेलका विकासकर्ताहरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई यो निःशुल्क प्रस्ताव गरेका छन्। जे होस्, खेल इन-अनुप्रयोग खरीदको साथ विज्ञापनका साथ आउँदछ।
डाउनलोड गर्नुहोस् पागल रेसि।
पछिल्लो तर कम्तिमा होइन, २०२१ मा अन्तिम सर्वोत्कृष्ट एन्ड्रोइड अफलाइन मल्टिप्लेयर खेल जुन म तपाईंलाई कुरा गर्नेछु भनिन्छ स्पेशल फोर्सेस ग्रुप २। भनिन्छ खेल विशेष गरी राम्रो शूटिंग मन पराउनेहरूका लागि उपयुक्त छ साथै एक कार्य पनि हो। खेल
यो पनि पढ्नुहोस्: कम्प्युटरमा PUBG क्र्यासहरू ठीक गर्ने W तरीकाहरू
खेल अनिवार्य रूपमा पहिलो व्यक्तिको शूटिंग हो। यदि तपाइँ खेलको अधिकतम बनाउन चाहानुहुन्छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँका सबै गेमिbबडिहरू Wi-Fi मा जम्मा गर्नुहोस् र रमाईलो गर्नुहोस्। थप रूपमा, खेल बम को एक विस्तृत श्रृंखला को साथ भर पर्छ आउँछ र हतियारहरू तपाइँले छनौट गर्नका लागि। यसको साथ, तपाईं नक्सा को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको माध्यम बाट नेभिगेट गर्नका लागि। त्यो मात्र होईन, यस खेलको साथ तपाईको खेलमा प्रयोग हुने बन्दूकलाई अनुकूलन गर्न सम्भव छ। तपाईं तिनीहरूको लागि धेरै विभिन्न खालहरू खरीद गरेर त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ।
खेल विकासकर्ताहरु द्वारा नि: शुल्क को लागी यसको उपयोगकर्ताहरु को लागी प्रस्ताव गरीएको छ। जहाँसम्म, खेलसँगै अनुप्रयोगभित्र खरीदहरूको लागि विकल्प छ।
कम्प्युटरले अनियमित विन्डोज १० इन्टरनेट जडान हराउँछ
स्पेशल फोर्सेस ग्रुप २ डाउनलोड गर्नुहोस्
त्यसोभए साथीहरू, हामी लेखको अन्तमा आएका छौं। अब यसलाई समेट्ने समय आएको छ। म आशावादी छु कि लेखले तपाईलाई धेरै आवश्यक पर्ने मूल्य प्रदान गरेको छ र यो तपाईको समयको साथ ध्यानका लागि लायक छ। अब जब तपाईंसँग आवश्यक ज्ञान छ राम्रोसँग प्रयोगको लागि निश्चित गर्नुहोस्। यदि तपाईको दिमागमा विशिष्ट प्रश्न छ भने, वा यदि तपाईले मलाई कुनै खास बुँदा छुटाएको जस्तो लाग्छ भने, वा तपाईले मलाई अरु केहि कुराहरुको बारेमा पूर्ण रुपमा कुरा गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया मलाई थाहा दिनुहोस्। म तपाईंको अनुरोधहरू स्वीकार गर्नका साथै तपाईंको प्रश्नहरूको उत्तर दिन खुसी हुनेछु।
क्रोमले विन्डोज working चलाउन बन्द गर्यो
विन्डोज अपडेटले मेरो आवाज मार्यो
tmobile लाई mif wifi मा समर्थन गर्दछ
विन्डोज १० बल १ update० update अपडेट गर्नुहोस्
रनटाइम ब्रोकर उच्च डिस्क प्रयोग
कोड रोक्नुहोस् इरकिएल कम वा बराबर छैन
विन्डोज १० ले USB लाई ram को रूपमा प्रयोग गर्दछ